सरकारी केटी ! « प्रशासन
सरकारी केटी !
प्रकाशित मिति : 17 October, 2020 11:39 am
बिहानीपख फोनको घण्टी अघिपछि भन्दा बेसी नै बजिरह्यो । साँच्चै आज त आलराम नबज्दै फोनको घण्टीले उठाएको– निद्राबाट झल्याँस्स ।
एकाबिहानै के–के न अर्जेन्ट फोन होला भनी हतपत उठाएँ ।
“सपनाको नम्बर होइन ?” उताबाट कसैले सोध्यो ।
“प्लीज रङ्ग नम्बर ।”
यति भन्दै म फेरि बिस्तारामै पल्टिएँ ।
केही बेरपछि फेरी त्यहीँ नम्बरबाट फोन आयो, उठाउन मन थिएन । एकचोटी राम्रैसँग सम्झाऊँ कि भनेर उठाएँ । फेरी फेरी यो नम्बरमा डिस्टर्ब नगर्न आग्रह गर्दै दाहिने कोल्टो पल्टिएँ ।
भित्तामा झुन्डाइएको घडीमा टक्क नजर अडियो । बिहानको ५:३० भैसकेको थियो। यसो आँग तन्काउँदै बिस्तारबाट उठेँ ।
केही बेरमै मर्निङ्ग वाक निस्किएँ । विश्वव्यापी कोभिड–१९ को कारणले राजधानी शहर पनि धेरै समयदेखि बन्द जस्तै थियो, कहिले लकडाउन त कहिले निषेधाज्ञाले । धेरै समय भएछ यसरी मर्निङ्क वाक ननिस्केको पनि । बल्ल निषेधाज्ञा फुकुवा भएपछि पहिलोपल्ट आज मर्निङ्ग वाकमा निस्केको ।
मर्निङ्ग वाकमा छउन्जेल कोही कसैको फोन आएन । एकोहोरो हिँडिरहँदा धेरै टाढा पुगेछु । फर्किन ढिलो हुन्छ कि भनी हतार–हतार डेरातिर लम्किएँ ।
टिभीमा समाचार हेर्दै बिहानको चिया पिएँ । किचेनको काममा रुमपार्टनर साथीलाई सघाएँ पनि ।
केही घण्टा नबजेको मेरो फोनले मौनता तोड्दै बज्न शुरु गर्‍यो । फेरि पनि नचिनेको नम्बरबाट कलिङ भइरह्यो ।
“ज्वाइँ साब नमस्कार !”
मैले फोन रिसिभ गर्ने बित्तिकै उताबाट आएको पहिलो आवाज थियो यो ।
म आश्चर्यमा परेँ ! नचिनेको नम्बरबाट फोन आउँछ । उसैमाथि यसअघि कहिल्यै नसुनेको आवाजले ज्वाइँसाब भन्दै पहिलो वाक्यमै सम्बोधन गर्छ ।
यसो घोरिएर सम्झेँ– ‘हँ !, म कसैको ज्वाइँ भैसकें र ?’
बिहे नै नभई कसको ज्वाइँ हुनु भन्ने ठानी रङ्ग नम्बर भन्ने तरखरमा थिएँ ।
अनि झट्ट सम्झिएँ– ‘के ज्वाइँ हुनलाई बिहे नै गर्नुपर्छ र ?! ज्वाइँको दाजु या भाइलाई पनि ससुराल तर्फकाले सम्मान गरेर ज्वाइँ भन्ने गर्छन् क्यारे । कतै मेरा कोही दाजुभाइका जेठान या ससुरा पर्ने पो हुन कि ?’
“हजुर नमस्ते ! भन्नुस् न के छ हाल खबर ?”
मैले यताबाट प्रतिक्रिया जनाएँ ।
“लौन ज्वाइँ साब् हाम्रो धने विदेशबाट कोरोनाले बेरोजगारी भई फर्कियो । हजुरको म्यानपावर यसो राम्रो भिषा आबेलाँ फेरी बाहिर पठाम्न परो । तेइ सल्लाह गरुम कि भनेर नि ज्वाइँ साब ।”
उताबाट यस्तो संवाद सुनेपछि म निश्चित भएँ । ‘यो फोन पनि रङ्ग नम्बर नै हुनुपर्छ, न मेरो म्यान पावर छ, न त मैलै चिनेको आफ्न्तीमा धने नामको केटो नै छ ।’ त्यसपछि म केही च्याठ्ठिएर बोलेँ ।
“कहाँ फोन गरेको ? रङ्ग नम्बर ।”
यति भनेर म बाथरुमतिर छिरेँ ।
बाथरुम पसेपछि फेरि फोनको घण्टी बज्यो । तर मैले फोनलाई खासै महत्त्व दिइन । आफ्नै काममा मस्त लीन भएँ । तर फोनको घण्टी बारम्बार बजिरह्यो ।
सोचेँ– ‘यस्तै रङ्ग नम्बरको बकम्फुसे फोन मात्रै आईरको त होला । दिमाग खराब । होइन आजको दिन राम्रो छैन कि क्या हो ? बिहानैदेखि दिमाग चाटिरा छन् पालैपालो फोनमा ।’
खाना खाईवरी अफिसको ड्रेस लगाएँ । डेरा नजिकै पर्ने चोकतिर निस्किएँ ।
चोकमा सायद अफिस जानेहरू नै होलान् बसकै प्रतीक्षामा थिए । म पनि उनीहरूकै हुलमा मिसिएँ ।
२÷४ वटा माइक्रो बसहरू लगातार आई रहे । तर माथिदेखि नै भरिभराउ भएर आएका, कोरोनाको डर त कत्ति नभएजस्तै । खुट्टा राख्ने ठाउँ धरि थिएन ।
यसो घडी हेर्न खोजेँ । हातमा घडी थिएन, सम्झेँ–नुवाई धुवाई गर्दा बाथरुममै खोलेर झुण्डाको । गोजीमा राखेको मोबाइलमा घडी हेरेँ ।
९.४० भैसकेको थियो । मोबाइलको स्क्रिनमा ६ मिस्कलले मलाई स्वागत गर्दै बसेका थिए। हेर्दै जाँदा मुटु चिसो भयो । होस, हवास नै उड्यो ।
तीमध्ये ३ मिस्डकल त मेरो हाकिमकै थियो ।
आज बुढाले मार्ने भए। यस्तो सोच्दै कल ब्याक गरेँ ।
हाकिम साबले एक घन्टीमै फोन उठाए ।
“अजित जी आज अल्लि छिटो आउनुपर्ने थियो । अर्जेन्ट कामले । अघि फोन गरेको उठेन त ।”
नम्र स्वरले हस् मात्रै भनेँ । अरू केही बोलिन ।
सडकभरि प्राइभेट राता नम्बर प्लेटका गाडीहरू, स्कुटी र बाइकहरू कुदिरहे । तर मेरो लागि भने त्यहाँ कुनै गाडी आएनन् यस्तो महामारी कोरोनाको बेला चढ्न आँट आउने गरी ।
ट्याक्सी पनि भन्दाभन्दै भेट्ट्याउनै मुस्किल । त्यसै क्रममा मेरो आँखा सडकको पारिपट्टिबाट आएको सेतो नम्बर प्लेटमा गएर ठोक्कियो । हेर्दाहेर्दै एक जना महिलालाई झराल्न म भन्दा केही अघि आएर झ्याप्प रोकियो । संयोगवश त्यो स्कुटीको पछाडि बस्ने महिला मेरो पुरानो चिनजानको रहिछन् । कुनै समय उनी र म एउटै कार्यालयमा काम गर्थ्यौ । केही बेरको कुराकानी पश्चात् सायद म गाडी कुरिरहेको भन्ने थाहा पाएरै होला उनैले मलाई स्कुटीको लागि सिफारिस गरिदिईन ।
स्कुटी छेउ पुगेँ ।
स्कुटी रोकेकी युवतीलाई आफू पनि सरकारी कर्मचारी भएकोले रुट मिल्छ भने मिल्नेसम्म लैदिन अनुरोध गरेँ । शुरुमा त उनले ठाडै अस्वीकार गरिन् । मेरो कुरालाई केही बेर बेवास्ता गरी । नगर्नु पनि कसरी ? यस्तो महामारी रोग व्याधिको बेला सबैलाई ज्यानको माया ।
मैले पुनःविन्ति गरेँ । जसरी पनि समयमै अफिस पुग्नु थियो । आज त झन् गाडी कुर्दाकुर्दै बेर पनि भाथ्यो । उनीसँगै आउने म्यामले कर गरेपछि बल्ल सहमति भइन्–पुतलीसडकसम्म पुराउन ।
म उनको पछाडि बसेँ । शुरुमा त छोइन्छ झैँ अल्लि परै बसेँ । बल्ल–बल्ल मोरीले लिफ्ट दिनसम्म मानिछे । कतै छोइँदा रिसाउने पो हो कि ?
सवारी हाँकिरहँदा स्कुटीको गतिसँगै बेलाबेला म उसको पिठ्युँमा ठोक्किन्थेँ । झट्ट सम्हालिन्थेँ पनि । घरीघरी त लडुँला जस्तो लाग्दा च्याप्पै पिठ्युँमा छुन पुग्थेँ । अनि झस्किहाल्थेँ – रिसाएर मोरीले यहीँ झार्दिई भने ।
लैनचौर नआउन्जेल हामीबीच केही बातचित भएन । तर उसले शरीर भरि छर्केको अत्तरको सुगन्धले मलाई नजिकै छौँ भन्ने आभाष दिलाई रह्यो । २०÷२२ वर्षे जस्ती लाग्ने भर्खरकी युवती सरकारी सेवामा देख्दा युवा भविष्यका कर्णदार हुन भन्नेमा विश्वस्त पनि भएँ ।
मनमनै उसको प्रशंसा गर्न थालेँ – ‘तिम्रै उमेरका केटीहरू दिनानुदिन नयाँ–नयाँ केटा साथीहरू फेर्दै चुरोटको धूवाँ र विदेशी वाइनको घुट्कीमा मस्त भइरहेका बेला कलकलाउँदो बैँसकी तिमी राष्ट्र सेवामा तल्लीन । कति लगनशील, परिश्रमी र जिम्मेवारीपूर्ण तिमी ।’
लैनचौरको चोकमा पुग्दा त्यहाँ ठुलो जाम थियो । स्कुटी डेग चल्ने ठाउँसम्म नि थिएन । अघिसम्म मौन रहेको म छटपटिएर बस्नु भन्दा गफगाफ गरौँ कि भनी बोल्न खोजेँ ।
“मिसको अफिस पुतलीसडक ? कुन अफिसमा हो नि हजुर ?”
उसले पुतलीसडकसम्म लिफ्ट मिल्छ भनेकोले अनुमान लगाएँ ।
“मेरो कहाँ अफिस हुनु ? हा.. हा.. ।” लामो हाँसो हाँस्दै आफू स्टुडेन्ट भएको बताई ।
तर मलाई उसको बोलीले रत्ती विश्वास दिलाएन ।
“हँ, मैले त तपाई नि निजामती कर्मचारी ठानेको त । मिस पनि ठट्टा गरिरहने क्या ?” मैले भनेँ ।
उ पुतलीसडकको कुनै एक कन्सल्टेन्सीमा काम गर्ने बताई । बल्ल उ खुल्न थाली।
“के म सरकारी जागिरे जस्ती देखिन्छु र ?” उसले मतिर मुन्टो फर्काउँदै सोधी ।
त्यो ड्रेस, सेतो प्लेट सवारी यी सबैले त्यस्तै देखाउँछ अनि के त ? मैले जवाफ दिएँ ।
मैले मिस भनेर सम्बोधन गरिरहँदा अफ्ठयारो महसुस भएको बताई । मिस नभन्न आग्रह गरी ।
“उसो भए म के भनूँ त ? मलाई तपाईँको नामै थाहा छैन ।” मैले भनेँ ।
उसले आफ्नो परिचय दिई । संगम रे उसको नाम ।
मैले त्यही नामले बोलाउन थालेँ । तर उसले मेरो परिचय मागिन या जरुर नै ठानिन । मैले पनि नसोधेपछि अरू केही बताइन ।
कुराकानीकै क्रममा उसको ड्याडी सरकारी जागिरे भएको कुरा बताईन् । उच्च पदस्थ नेपाल सरकारका कर्मचारी रे ! उसले चढ्ने स्कुटी ड्याडीले अफिसबाट झिकाएका रे !
छोरीलाई स्कुटी दिएर ड्याडीचाहिँ के चढ्ने रैछन ? मलाई खुल्दुली बढ्यो । अनि मैले सोधिहालेँ ।
ड्याडीले त झन् गाडी चढ्छन् रे ! अफिस लान र लैजाने एक जना ड्राइभर भएको कुरा बताईन् ।
केही बेरपछि जाम खुल्यो । तर स्कुटी स्टार्ट नै भएन । झन् ढिला हुने पिरले म आत्तिएँ । तेल सिद्धिएर हो कि झैँ लाग्यो । नजिकैको पम्पमा तेल हाल्न जान आग्रह नि गरेँ ।
“हा.. पेट्रोलको कुपन छँदै छ, फोकटमा किन पैसा खर्चिनु त्यही नि हिजो फुल गरेको ।” उसले ढुक्कसाथ भनी ।
पेट्रोलको कुपन पनि ड्याडीले अफिसबाटै मिलाएको बताई ।
एकछिनमै आफै स्टार्ट भयो, हामी अगाडि बढ्यौँ ।
“छोरीलाई साह्रै माया गर्ने ड्याडी । यस्तो ड्याडीको छोरी हुन पाउनु अहोभाग्य ! ”
मैले व्यङ्ग्यात्मक पाराले उसलाई फुकाइरहेँ ।
“स्कुटी त ल्याईसियो । एउटा आइफोन नि भनेको टारिसिन्छ र पो ।” उसले आइफोन नपाएकोमा ड्याडीसँगको गुनासो पोखी ।
“मेरो साथी आशिषलाई त बाबाले पल्सर बाइक मिलाईसिएको छ । आइफोन पनि अफिसकै चलाउँछ उ । उसको बाबा पनि मन्त्रालयकै ठूलो मान्छे हो रे ।”
गफैगफमा झर्ने बेला आइसक्यो । म पुतलीसडकको छेउमै ओर्लिएँ । ऊसँग बिदा भएर म हतारिँदै अफिसतिर लम्किएँ ।
शायद अफिस ढिलो गर्‍यो भनेर हाकिम सावले नमस्कार गर्दा राम्रोसँग फर्काएनन् । फुलेर बसिरहे । म नबोली सरासर आफ्नो काम गर्न तर्फ लागेँ । काममा रहँदा त्यो बाटोका घट्नाहरु मनभरि खेलिरहे ।
राज्यको सम्पत्तिको कति दुरुपयोग ? है ! आफूले लिनसम्म त ठिक हो, परिवारलाई समेत ? तिनै हाकिमका परिवारले हाम्ले नपाएको सुविधा प्रयोग गरिरहने ? अनि केही बेर ढिलो भयो कि तिनै हाकिमको उल्टै हप्की खानुपर्ने ?
यता हामीजस्ता निमुखा कर्मचारी घन्टौँ कुरिरहँदा समेत सहजले सवारी पाउँदैनौँ । अझ अहिलेको समयमा कि त कोरोनासँग बाजी लगाएर सार्वजनिक यातायात चढ्नु पर्ने कि त कुर्कुच्चा सुनाउँदै पैदलै हिँडिरहने । कमसेकम हाकिमका परिवार, नातेदार, इष्टमित्रलाई प्रयोग हुने सवारी खरिद गर्नुको सट्टा अन्य कर्मचारीहरूको लागि रुट मिलाएर साझारूपमा चलाउने गरी सवारी व्यवस्था गरे हुने नि ! यसो गरे त हामीजस्ता कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च रहने अनि बेलैमा कार्यालयमा पुग्न समस्या नहुने । अनि उता सरकारी साधनको दुरुपयोग पनि हुन नपाउने । तर यथार्थ बेग्लै छ त्यसैले त मुक दर्शक भएर हेर्नु परिरहेको छ ।
अफिसको प्रयोजनका लागि बिदाको दिनमा सेतो प्लेटको सवारी गुड्दा खुबै निगरानी राखिन्छ । विना पास चलाउनेलाई कहिलेकाहीँ कारबाही नि गरिन्छ । तर जो कार्यालयसँग सम्बन्धित काममा प्रयोग गरिएको हुन्न । नितान्त व्यक्तिगत काममा मात्रै प्रयोग हुन्छ । विनासित्ती शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरेर लिइन्छ । के यस्ता दुरुपयोग भइरहन दिने ? होइन भने यस्तो खालको दुरुपयोग कसले रोक्ने ?
सायद संगमलाई मैले शुरुमा सरकारी कर्मचारी केटी ठाने झैँ अरूले पनि त्यस्तै मान्दा हुन् । कलिलो उमेरमै सरकारी सेवा प्रवेश गरिछे भनेर दङ्ग पनि पर्दा होउन् । कतिले उ जस्तै हाम्री छोरी बुहारी पनि भईदिउन भन्ने शुभेच्छा पनि राख्दा होउन् ।
सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्ने उ आज सरकारी केटी भएकी छे । सरकारी सुविधा र सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर सबैको नजरमा ठाँटिएर हिँडेकी छे । तर कसलाई के थाहा ? उसले पनि केही गल्ती पक्कै गरेकी छे । तर पनि अन्योल छ कानुन, चुपचाप छ समाज अनि मस्त छन् सरकारी कोषमा आफन्त रिझाउनेहरू ।
Tags : कर्मचारी राजेश लम्साल सरकारी केटी
13 April, 2021 10:01 pm
नयाँ वर्ष ! विर्सन लायक पुरानो वर्षमा दिन, महिना र